Umdyarho weHarse Stars yeHlabathi yenye yezinto ezothusayo zonyaka | I-Androidsis
Khathalela kwaye uqeqeshe amahashe akho ukuba azalele iqela leentshatsheli kwiRival Stars Horse Racing
Umdyarho weeNtshatsheli zeHarsley ngumdlalo omtsha wokubheja ngokuthatha lonke uchulumanco lokubaleka amahashe. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikusa kwindawo ekuza kuba kukuzala, inkathalo kunye noqeqesho lwala mahashe aphumeleleyo aza kuba ziintshatsheli.
Ke sijamelene nomdlalo owahlukileyo kwiVenkile yeGoogle Play kwaye kunjalo ukufumana ulwamkelo olukhulu luluntu lwe-Android. Masithi unayo yonke into ukusuka kwinyathelo le-3D yokukhwela ihashe ngokwakho kuyo yonke loo ndawo yokulinganisa apho uya kuthenga khona amahashe nokunye okuninzi; ewe yi freemium.
1 Ukuzala intshatsheli
2 Umdyarho weeNkwenkwezi zamaHashe oMlinganiso yi-freemium
3 Yonke inye
Ukusuka kwiscreen esamkelekileyo soMdyarho weHlabathi weeNkwenkwezi eziQabane sele siqalisile ukuqaphela ukuba sijongane nolunye uhlobo lomdlalo. Ubuncinci ngayo yonke imvelaphi eza ngqo kugqatso apho kuya kufuneka sihambise ihashe lethu kwelinye icala liye kwelinye, jikelezisa umbono wakho ukuze ubone ukuba ngoobani iimbaleki eziza kuthi kunye neqhosha le-turbo ukukhawulezisa ngalo mzuzu ulungileyo apho kufuneka sidlule khona phambi kokuba ifoto igqibe ukuphumelela.
La Umbono wekhamera ulungile emva kwejockey, ke siyakuba nombono ongcono wokufumana umntu wokuqala ukuba yintoni ukukhwela ihashe lomdyarho kunye nendlela isekethe evula ngayo kugqatso lwehashe lethu.
Oko kukuthi, kwimizuzu nje embalwa ujongene nolunye uhlobo lwamava okudlala kwaye apho okubonwayo kwenziwa kakuhle kakhulu. Ngamanye amagama, umdyarho weHarse Stars yeHlabathi ivelisa ukoneliseka okuninzi kwimizuzu embalwa. Ukuba besele siluqalisile uhambo lwethu nesitali, sithenga amahashe, siphucula nezinye izinto, saqala ukuzifaka kumdlalo oza kwi-Android ngomnqweno omkhulu wokuwaphula.
Umdyarho weeNkwenkwezi zamaHashe oMlinganiso yi-freemium
Kwaye ngekhe silibale ukuba sijongana ne-freemium emsulwa. Ekuqaleni siya kuba nakho ukuvula imidyarho kunye nokuphuculwa simahla ngaphandle kwexesha, kodwa kula maxesha alandelayo ungaqhela ukulinda iiyure ezi-3 de kube kugqityiwe ukuphuculwa. Ngelixa sinokujonga zonke iinketho zakho ze hlaziya ilifa losapho lwakho kwaye ube yintshatsheli.
Sithetha ngokuhamba kumdyarho weembaleki odumileyo, ukwandisa udumo, ukunyuka kwezikhundla kunye nokuthatha iindima ezahlukeneyo kumdlalo omnye: umfuyi, umqeqeshi wehashe, umphathi wohlanga, ijokhi kunye nokunye okuninzi. Ngaphandle kwamathandabuzo impumelelo enkulu yalo mdlalo eya kusikhokelela kwimizobo ekumgangatho ophezulu ngaphezu kweemposiso eziyinyani.
Kuqala unako Yenza i-jockey yakho ngengubo yakhe, umbala nobume bobuso. Emva kwale nkqubo nje, uyakufumana ugqatso lwakho lokuqala kunye nemvakalelo yokuba zonke iiopopayi ziyinyani. Into emayithethwe ukuba ihashe ngalinye olifumeneyo liya kuba nenkangeleko yalo, iimpawu, imbali yomnombo kunye neenkcukacha-manani.
Njengoko besesitshilo, eyona nto intle malunga neRival Stars Horse Racing kukuba inayo zombini icandelo le-simulator kunye nenxalenye yesenzo kumdlalo ofanayo. Ke ukuba uchitha ixesha ulawula isitali sakho, uqeqesha amahashe akho okanye ujonga ukuba kuya kuba yintoni na ukuthengwa okulandelayo, ungaya ngqo kugqatso lokukhwela elo hashe.
Ngokobuchwephesha ngumdlalo onqamlela kwimfezeko kwaye ithathwa ngononophelo ngokweenkcukacha. Ukuqaqambisa isandi esilawulayo esikwazi ukusizisela ubuqaqawuli obugqithisayo babaleki bamahashe bokwenyani. Yonke into ekwiRival Stars Horse Racing iyancitshiswa ukuze ivelise imvakalelo elungileyo. Iinkcukacha ezinje ngoopopayi kunye noyilo lwamahashe kukususa umnqwazi.
Umdyarho wamaHashe eQabane lembangi ufika elangazelela ukuba yenye yeemvakalelo zonyaka. Ukuba ufuna ukuphuma kuxinzelelo lweemidlalo ezinje ngePUBG Mobile okanye Fortnite, sicebisa ukuba uzame ukuphumla okubonelelayo. Siyakushiya ngesinye isimulator, nangona eli lelinye lamaphenyane.
UMdyarho wamahashe oMbaleki
Umdlalo owonakele kakhulu
Oopopayi kunye nengoma yesandi
Ukwazi ukulawula isitali sakho njengokubaleka kukhuphiswano
Into ye-freemium ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Khathalela kwaye uqeqeshe amahashe akho ukuba azalele iqela leentshatsheli kwiRival Stars Horse Racing
I-Galaxy Qaphela i-9 ifumana uhlaziyo olutsha kunye neendaba kwimowudi yobusuku kunye nekhamera
Iinjini zeGRID Autosport ziyagquma - joyina i-beta evaliweyo yabadlali abaninzi ngoku